विराट कोहलीले शतक हानेपनि भारतलाई फ्लोअनबाट जोगाउन सकेनन् ! | newdnn.com
१,सोमबार १८:४१ Sangita Rai
एजेन्सी, २ मंसिर । अरु कुनै पनि व्याट्सम्यानले अर्धशतक बनाउन नसकेका बेला कप्तान विराट कोहली एक्लैले दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको दोश्रो टेस्टको पहिलो इनिङमा १ सय ५३ रन जोडे ।
अपसोच ! उनको करियरको २१ औँ टेस्ट शतकले भने भारतलाई फ्लोअनबाट जोगाउन सकेन् । टिमको स्कोर ३८ रन हुँदा नै दुई विकेट गुमेको अवस्थामा क्रिजमा आएका कोहली अन्तिम विकेटको रुपमा आउँट हुँदा भारतलाई ३ सय ७ रनको अवस्थामा पुर्याए ।
जब की दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो इनिङमा ३ सय ३५ रन बनाएको थियो । र भारत पहिलो इनिङमा २८ रनले पछि पर्यो ।
तर सोमबार नै आफ्नो दोश्रो इनिङ थालेको घरेलु टोली अफ्रिकाले २ विकेटको क्षतिमा ९० रन जोडेको छ । र भारतविरुद्ध १ सय १८ रनको अग्रता लिएको छ ।
क्रिजमा रहेका पुर्वकप्तान एबी डिभिलियर्स ५० रन बनाएर अर्धशतकका साथ क्रिजमा छन् भने र डिन एलिगरले उनलाई भरपर्दो रुपमा साथ दिइरहेका छन् ।
तेश्रो दिनको तेश्रो सेसनमा भने खराब प्रकाश परेपछि खेल स्थगित गरिएको छ । भारतका जस्प्रित बुम्राहले शुरुवाती दुई विकेट लिएका छन् । चौथो दिनको खेलमा भारतका बलरको प्रदर्शनमा अब विराट कोहलीको २५ बर्षपछिको जितको सम्भावना बाँकी छ ।
पहिलो टेस्ट गुमाएको अवस्थामा दोश्रो र तेश्रो टेस्ट जितेमात्रै भारतले श्रृङ्खला जित्नेछ र पछिल्ला ९ खेलको अपराजित यात्रालाई कायम राख्नेछ । तर व्याटिङ र बलिङ दुबैमा प्रभावशाली दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध जित निकाल्नु विराट कोहलीका सामु अहिलेसम्मकै ठुलो चुनौति छ ।